Ukulamula - Indlela Enokuthula | Izinkampani Zomthetho eDubai
Ukubambisana - Indlela Yokuthula
Arbitration luhlobo lweSingululo Sengxabano (Alternative Dispute Resolution) (ADR) futhi luhloselwe ukusiza amaqembu ukuba axazulule lolu daba ngaphandle kokuthatha icala enkantolo.
Njengoba i-Abstraction iyindlela enokuthula, kuyinhlangano evamile, okungukuthi, zonke izinhlangothi ezithintekayo kule nqubo kumele zivumelane ukwenza ngaphambi kokuba inqubo iqalwe.
Isigatshana se-Abstraction kumele sibe khona ngaphambili kusenkontileka. Ngeke wanezelwa emva kwalokho ngaphandle kwemvume yazo zonke izinhlangano ezibandakanyekile kanye nesinye isignesha yesivumelwano, ngamagama afanayo achaziwe ngenhla.
Ifomu le-Abstraction lisenkontileka yomshado, lapho izingxenye zombili zivumelana ukuthi yiziphi izingxenye zomnikazi wefa lomndeni. Ngezivumelwano zokuhweba, lesi sigaba somthetho sivame ukufakwa ezinkontileka ezibandakanya ukuqashisa noma ukuboleka imali. Uma iqembu lokuqashisa lingakhokhi imali ekhonjisiwe ngesikhathi, i-leaser party ingase ibuyisele izimpahla futhi ayikho enye isenzo somthetho esizothathwa.
Umshwana we-Abstraction ungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuqeda isivumelwano ngaphandle kokufaka isicelo sokungenelela enkantolo nokusebenzisa imali kuyo.
Sicela uxhumane nathi ngomusa Amacala Wokubambisana